Sida loo abuuro loona kaydiyo qoraalada shaqsiyeed Calaamadaha | Androidsis
Sida loo abuuro loona keydiyo qoraalada shaqsiyeed Calaamadaha
Isticmaalayaal badan ayaa siinaya Signal isku day sida macaamilka farriinta kahor WhatsApp, codsi aad ku aqbali doonto siyaasadda cusub ee asturnaanta illaa 15-ka Maajo. Amniga ayaa ka mid ah qodobada ay kaga dhex muuqato barnaamijkan la bilaabay bishii Nofeembar 2015.
Signal wuxuu hayaa xulashooyin aad u xiiso badan, iyaga dhexdooda waad awood u siin kartaa hab mugdi ah, tirtir fariimihii hore wuu jiran yahay awood u siiso wada sheekaysiga farriimaha lumaya. Mid ka mid ah waxyaabaha sidoo kale la samayn karaa waa Abuur oo kaydi qoraaladaada shaqsiyeed Signal, gaar ahaan inaad had iyo jeer wax xasuusato.
Waad keydin kartaa taariikh dhalasho, ballan aad qof la gasho, liistada dukaameysiga ha keydiso si aad uga dhigto macluumaadka aadka loo aamminsan yahay iyo macluumaadka kale. Qoraallada shaqsiyadeed ee Sginal ayaa wax walba u fiican waxqabad badanna waad kaheli kartaa hadaad badanaa isticmaasho.
Waxaad keli kuheli doontaa marin, maxaa yeelay waa la xareeyay oo waxaad ku dari kartaa lambar sir ah oo amniga aad u weyn sida haddii aysan intaas kugu filnayn. Signal sida codsiyada kale waxay leeyihiin ikhtiyaarro kala duwan oo adeegsade kastaa uu marin u heli karo iyada oo wakhti loo hurinayo barnaamijka.
Wixii ah sida loo abuuro loona kaydiyo qoraalada shakhsiga ah ee Signal waa inaad u sameysaa sida soo socota:
Ku fur barnaamijka Signal qalabkaaga Android
Guji astaanta qalinka, waxay ku weydiin doontaa rukhsad haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad isticmaasho
Markaad gudaha gasho, guji "Qoraalada Shakhsiyeed" waxaadna heli doontaa meel aad kuqorto waxaad ubaahantahay inaad xasuusato wakhti kasta, maadaama aad furi karto markasta oo aad rabto
Miyuu leeyahay hawl kasta oo lagu sheekeysto, waxaad ku arki doontaa dusha sare ee sheekaysiga illaa inta aysan waxqabadyo badan lahayn, waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad keydiso feylallo fara badan, dukumiintiyo iyo noocyo kale oo feylal ah
Shaqadan waxaa horeyba u isticmaali jiray isticmaaleyaal badan oo Calaamado leh, kaas oo horeyba u qoraya macluumaadka lagama maarmaanka ah maalinba maalinta ka dambeysa si loo xasuusto waxyaabaha muhiimka ah ee la tilmaami karo. Qoraallada shaqsiyeed waxay leeyihiin qoraal aan dhammaad lahayn waana suurtagal in la keydiyo dhammaan macluumaadka aad rabto, dhammaantood bilaa xadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo abuuro loona keydiyo qoraalada shaqsiyeed Calaamadaha
Sida loo ogaado barnaamijyada ka socda waddankaaga